HGH Thailand - ịmatakwu banyere hormone growth na Bangkok
Okpokoro hormone (Hormone na-eto eto, GH, HGH, Somatotropin, somatropin) - hormone peptide nke pituitary ahụ, nke a na-eji mee egwuregwu Maka ịmepụta ahụ ike. Mmiri hormone ma ọ bụ somatotropin (sitere na Latin soma - ahu) nwetara aha ya maka ndị na-eto eto, ọ na-eme ka ọganihu dị ịrịba ama na ntinye (ogologo). Ọ bụ n'ihi na ọganihu nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị elu na-eto eto.
Ebumnuche nke ntolite na-eto eto na ọbara bụ 1-5 ng / ml, ebe ọnụ nwere ike ịrị elu na 10-20 na ọbụna 45 ng / ml. Ọ bụ nke mbụ na 1956. Mkpụrụ osisi na-eto eto na-eme ka ọ bụrụ ihe na-egosi na hypothalamus. Ọtụtụ mgbe, mgbe afọ iri abụọ gasịrị, mmepụta nke hormone site na ahụ na-ebelata. Usoro ịka nká na-emetụta ọnụego nke mwepụ nke hormone. Ná nkezi, mgbe afọ 20 gachara, ihe ọ bụla 10 afọ na-adaba site na 15%.
Mmiri hormone na-eto eto enweghị esemokwu mmekọahụ. Nke ahụ bụ, ọkwa ya hà nhata na ndị ikom na ndị inyom. N'agbanyeghi na ojiji nke preparations nwere hormone na-eto eto, machibidoro VADO (Òtù Na-ahụ Maka Ntuchi Ụwa), HGH preparations ndị dị na Thailand.
Njirimara ọgwụ nke HGH:
- Anabolic utịp - na-akpata ọganihu ahụ
- Omume-emegide-emechi - na - egbochi nkwụsị ahụ ike
- Belata abụba ahụ
- Mee ka ike jiri ya
- Ọgwụgwọ ọgwụ
- Nwere mmetụta nke rejuvenating
- Na - eme ka ọganihu nke akụkụ ahụ dị iche iche (nke a na - etoju)
- Na - eme ka uto ọkpụkpụ na mmụba na - eto eto na ndị na - eto eto ruo afọ 26 (ruo mgbe mmechi nke ebe), na - ewusi ọkpụkpụ
- Na - eme ka ọkwa glucose dị n'ọbara
- Na - eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dị ike
Ụfọdụ n'ime nsogbu ahụ ọgwụ na-akpata onwe ya, ma akụkụ ahụ nke insulin dị ka ihe na-akpata ya bụ IGF-1 (nke mbụ a na-akpọ somatomedin C), nke a na-emepụta site na omume nke hormone na-eto eto na imeju na-akpali Uto nke otutu ihe di n'ime. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmetụta nile nke hormone growth na egwuregwu ndị metụtara IGF-1.
Mgbanwe nke afọ na-arụ ọrụ na nzuzo nke hormone
Ihe ndị na-emepụta ọgwụ nke hormone ahụ na-ebelata mgbe ọ dị afọ. Ọ dị ntakịrị na ndị agadi, bụ ndị belatara dị ka ntọala, na ugboro ole na njupụta nke ọnụ ọgụgụ isi nzuzo. Akara usoro nke hormone nke na-eto eto bụ ihe kachasị na nwata, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe kachasị na-emepụta ihe n'oge ahụ dị afọ iri na ụma na-eto ngwa ngwa ngwa ngwa na n'oge ntorobịa. Mkpụrụ obi Circadian na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ nke hormone:
Ihe nzuzo nke hormone nke na-eto eto na ọtụtụ hormonụ ndị ọzọ na-eme kwa oge ma nwee ọtụtụ ọnụ n'elu ehihie (na-emekarị ka secretion na-eme kwa ụbọchị 3-5). A na-ahụ elu kachasị elu n'abalị, ihe dị ka awa mgbe ụra buuru.
Otutu hormone na bodybuilding na Thailand
Na mbido, a malitere iji ọgwụ homalite mee ihe maka ọgwụgwọ, Otú ọ dị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ, hormone a jupụtara ebe niile n'egwuregwu, n'ihi ikike nke ime ka ụbụrụ dị elu ma belata anụ ahụ. Nkwadebe mbụ nke HGH bụ anụ ahụ dị ọcha, ọ bụkwa naanị na 1981 ka a na-eme ka ọgwụ ọjọọ na-aṅụ ọgwụ.
Na 1989, ndị omempụ Olympic na-amachibido hormone. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a machibidoro iji hormone nke na-eto eto na-eme egwuregwu, n'ime afọ iri gara aga, ire ahịa nke ọgwụ ahụ arịbara ọtụtụ ugboro. Karịsịa, hormone na-eto eto na-eji eme egwuregwu, karịsịa na bodybuilding, ebe ọ na-ejikọta na ọgwụ ndị ọzọ anabolic.
Gbanwee oke akwara na abụba
Isi ihe mere HGH ji mara egwuregwu bụ ikike nke belata oke abụba. Tụkwasị na nke a, ọmụmụ ihe egosiwo na mmụba nke na-eto eto na-eduga n'ịmalite ikuku muscle ahụ, anụ ahụ jikọtara ọnụ ma mee ka ụbụrụ muscle dịkwuo elu site na nchịkọta mmiri.
Mmetụta ọzọ bara uru nke hormone nke na-eto eto - belata ugboro nke ọnyá. Nke a bụ n'ihi ike ya iji wusi ọkpụkpụ na njikọta (tendon, cartilage) anụ ahụ. Mkpụrụ hormone nke na-eto eto na-eme ka ngwọta na anụ ahụ dịghachi mgbe mmerụ ahụ gasịrị.
Ekwesiri iburu n'uche na iji HGH eme ihe n 'ikpo ume bu ihe efu, ebe obu na omuma a achoputara na o nweghi ike ime ka ike. Ngwurugwu ahụ na-eme ka ume na arụmọrụ dịkwuo elu, na nke dị iche, mmụba na njedebe nke ike ọgwụgwụ ma na-akwụsịlata mgbake ahụ, ya mere, hormone na-eto eto abaghị uru maka ndị na-eme egwuregwu dị otú ahụ, ebe ndị a na-egosi.
Nkwuzu okwu a bụ na a pụrụ iji hormone na-eto eto na egwuregwu na nzube nke inweta enyemaka.
Arụmọrụ dị elu, mmetụta dị ala nke mmetụta mmetụta, ọgwụ adịghị emetụta ọrụ nke penis na ike anaghị akpata mmetụta nke androgenic na ọ dịghị achọ PCT mgbe ọnụọgụ ọnwa ọ bụla dị arọ (3-4 kg), na N'ọnọdụ ufodu, ọ bụghị mgbe niile ka enwere nnukwu nnukwu mmanụ.
Ọnụ ahịa dị ukwuu nke ọgwụ ọjọọ bụ ihe dịka puku 2-3 puku dollar kwa otu.
Mmetụta dị na hormone nke mmadụ
Ebe ọ bụ na HGH na-emepụta ihe dị na ahụ mmadụ, mmetụta dị iche iche nke HGH dị ụkọ. Mmetụta dị iche iche na-emekarị n'ọnọdụ ndị ahụ ebe a na-eji oganihu eme ihe na doses dị elu karịa ka akwadoro na ogologo oge karịa ndị ọkachamara kwuru. Na omume, a na - eso mmetụta ndị na - akpata mmụba nke ụmụ mmadụ (ugboro ugboro):
Ọrịa ụfụ na-egosiputa site na mgbu na nkwụsịtụ na njedebe. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụbụrụ na-arịwanye elu na-eme ka akwara dị elu dị elu. Njirimara nke a abụghị ihe dị ize ndụ, a na-edozikwa ngwa ngwa mgbe ị belata ọgwụ ahụ.
Nchịkọta nke mmiri, ọ naghị enwe mmetụta dị n'akụkụ, n'ihi na nchịkọta nke mmiri dị n'ime ahụ ike, na-enye ha nnukwu nha na elasticity. N'ozuzu, ọhụụ dị ntakịrị mgbe njedebe nke usoro ahụ gasịrị.
A na-ekpochapụ ọbara mgbali elu ma ọ bụ site n'ibelata HGH, ma ọ bụ iji ọgwụ ndị na-egbochi ọrịa ọgwụ.
Mgbochi nke ọrụ nke thyroid gland - bụ onye na-apụtaghị, n'ihi na mmegbu dị nnọọ ala. Maka mkpochapu ya na ime ka arụ ọrụ nke usoro ahụ jiri Thyroxin mee ihe na 25 mcg kwa ụbọchị. Mgbe nkwusiri nke hormone nke na-eto eto, arụ ọrụ gị na-arụ ọrụ zuru ezu.
Hyperglycemia - mmụba nke ọkwa glucose n'ọbara. Ejichapu insulin ma ọ bụ ọgwụ ndị na-akpali pancreas (gliclazide). Ọ naghị achọkarị ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe. I nwekwara ike iji ihe gbasara mkpụrụ alpha lipoic acid, ọ na-eweghachite insulin sensitivity.
Acromegaly - ọrịa ahụ na-eme n'ihi na a na-akpọ ya ọgwụ ọjọọ nke hormone. Mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, achọtaghị ya.
Hypertrophy nke obi na akụkụ ndị ọzọ na-eme nanị n'okwu gbasara iji oge HGH eme ihe n'ozuzu. Mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, achọtaghị ya.
Mmetụta mmetụta uche nke hormone na-eto eto
Ọganihu n'ime afọ - a na-ekwenyekarị na hormone nke na-eto eto nwere ike imeju afọ n'ihi hyperplasia nke akụkụ ahụ (dịka eriri afọ na akụkụ nwere ihe nzaba maka IGF-1). Enwereghi ihe omumu sayensi nke eziokwu a, Otú o sina di, ihe omuma nke mgbanwe nke afo n'ime ndi mmadu nwere ike ime ya. Otú ọ dị, ahụmịhe bara uru nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-egosi na usoro ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke hormone nke na-eto eto anaghị eduga n'uto nke afọ. Ndị ọkachamara kweere na mmụba nke afọ (na English Internet na-ejikarị okwu "GH gut") nwere ọtụtụ ihe ndị metụtara ahụ ike na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eji nnukwu doses nke GH tinyere insulin, steroid, na iji ọtụtụ Nri.
Mmetụta na ike na ọrụ nke amụ - HGH enweghị mmetụta na-ezighị ezi na ọrụ mmekọahụ.
Mmetụta nke ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-akpata ahụmahụ - Prọfesọ Elmer M. Cranton, MD mere nnyocha banyere ihe karịrị ndị ọrịa 100, bụ nke a na-adịghị achọpụta na ọ na-egbochi onwe ya.
Ọrịa cancer - hormone nke na-eto eto na-eme ka ọganihu dị ịrịba ama nkewa nke mkpụrụ ndụ tumo, ya mere ndị na-eme nchọpụta na-eche banyere ma mmụba na-eto eto na uru. E nwere nnyocha a na-atụgharị anya, bụ ndị ndị na-eto eto na-eto eto na-emetụta, ugboro ole na-adịghị emepụta ihe ndị ọzọ na-adịghị na ọnụ ọgụgụ dị iche na nke ndị ọzọ nwere ike ikwu maka enweghị mmetụta carcinogenic nke hormone growth.
Nkwuzu okwu nke gbasara mmetụta ndị dị na ya
Mkpụrụ hormone nke na-eto eto anaghị adịkarị na-akpata mmetụta ndị ọzọ ma ọ bụrụ na a na-etinye ya na doses. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmetụta niile nwere ike ime. N'otu oge ahụ, e gosipụtara n'ụzọ doro anya na njikere nke HGH nwere ike ime ka aru ahụ dịkwuo mma iji meziwanye ahụ ike, belata cholesterol ọjọọ, melite akpụkpọ ahụ, na-eme ka ọkpụkpụ na ọnyá na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma pụta.
Ndị na-eme ka hormone na-eto eto
Ndị isi na-achịkwa ihe nzuzo nke hormone nke na - eto eto - hormones peptide nke hypothalamus (somatostatin na somatoliberin), nke sel neurosecretory zoro ezo nke hypothalamus na-abanye na veins nke pituitary ma na-eme na somatotrope. Otú ọ dị, ọ bụ ọtụtụ ihe ndị metụtara ahụ ike na-emetụta nguzo nke hormones ndị a na nchịkọta nke hormone. Ndị ọkà mmụta sayensị egosila na ogo nke hormone nwere ike ịmụba site na 3-5 ugboro, na-ejighị usoro hormonal.
Peptides bụ ndị na - akpali akpali nke kachasị na - eto eto, na - amụba 7 - 15 oge ịta ahụhụ ọnụahịa nke otu ihe ọtụtụ ugboro n'okpuru:
HGH Frag (176-191) - iberibe
Hụm na-eto eto na peptides na bodybuilding
Peptides (Site na Grik) - ezinụlọ nke ihe ndị nwere mkpụrụ nke mkpụrụ ndụ ya sitere na nsụgharị nke α-amino acids jikọtara na peptide (amide) agbụ. Ha bụ ihe okike ma ọ bụ ogige ndị nwere ihe nkiri nwere ọtụtụ iri, otu narị ma ọ bụ puku puku Mkpụrụọrụ Monomeric - amino acids. Nke a dịgasị iche iche ma na-arụ ọrụ dịgasị iche iche n'ime ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle nanị peptides ndị a na-eji na-eme egwuregwu iji dozie ihe ndị na-egosi ahụ.
Ugbu a n'ahịa nke Thailand Enwekwu ugbua na enwere peptides, nke na-akpali akpali nke hormone. Peptides kachasị ewu ewu na bodybuilding na Thailand:
Site na otu Ghrelin (GHRP): (mepụta oghere dị elu GR na-esote ngwa ngwa mgbe o jesịrị ya, n'agbanyeghị oge nke ụbọchị na ọnụnọ nke somatostatin na ọbara).
GHRP-6 na Hexarelin
Site n 'uto nke uto Nke na - eme ka a na - ebute hormone (GHRH): (mmalite n'ime ahụ na - eme ka mmụba dị elu nke na - adịghị ike n'ime awa mgbe a na - emechi ihe ndị dị na GRS site na somatostatin, na elu n'oge okike Abawanye na oghere GR (eg n'oge abalị). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, GHRH na-eme ka nlezianya nke GRS na-amụba, na-enweghị nsogbu nke usoro usoro usoro.)
HGH Frag (176-191) bụ mkpirikpi nke hormone growth (abụba abụba)
Uru nke peptides
Ọtụtụ ajụjụ na - ebili, gịnị mere ị ga - eji mee ihe ọhụrụ peptide, ma ọ bụrụ na hormone na - eto eto? Azịza ya dị mfe: ihe mkpali peptide nwere ọtụtụ uru bara uru.
Peptides dị nnọọ ọnụ ala karịa hormone growth. Ụgwọ nke ihe yiri nke ahụ ga-aba ọtụtụ ugboro.
Usoro dị iche iche nke ime ihe na ọkara ndụ na-eme ka anyị nwee ike ijikwa oghere ịta ahụhụ maka nzaghachi anabolic dị mma.
Mmetụta dị iche iche na agụụ na metabolism, na-enye gị ohere ịnye mmasị na ndị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
N'oge enweghi iwu iwu na mmepụta nke peptides, ya mere ọ dị mma ịhazi online.
Ngwa ngwa na kpamkpam etisasịwo, n'ihi ya ọ dịghị atụ egwu ịchịkwa akara.
Peptides, nakwa na hormone na-eto eto dị mfe ịlele maka eziokwu. Ogbesiri iji uzo somatotropin na-aga n'ule mgbe ịchichi ọgwụ.
Iji mee ka ọgwụ ndị a na-eto eto toro?
Ha nwere ike iji hormone na-eto eto ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị karịa afọ 20 (ka ndị na-eto eto nwere ike inwe ọkpụkpụ ọkpụkpụ) iji mee ka ọ dịkwuo mma. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu na-aba ụba, nke a na-eme site na nnukwu Abaghị uru.
Mmetụta dị iche iche n'oge na mgbe a na-emebeghị ihe ọmụmụ, ha na-abụkarị ihe a na-apụghị imegharị anya.
A na-egbochi usoro ahụ maka ndị na-arịa ọrịa shuga (hormone nke na-eto eto na-eme ka ọnụ ọgụgụ glucose dị n'ọbara) dị elu, a ghaghị iji nlezianya mee ihe na ọbara mgbali (mmụba nke mmadụ nwere ike ime ka ọ dị elu). Tupu ịṅụ ọgwụ ahụ, ị ​​ga-achọ dọkịta.
Elu 3 kachasị ewu ewu na HGH na Thailand